စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလမ်းမထက်မှ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကြောင်းပုံပြင်များ… – PVTV Myanmar
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ဆေးရုံကို ဘာကြောင့်ကျောခိုင်းရတာလဲ?
BBC News ၏ Tales from the Street:
The medical officer helping doctors flee ကို ခံစားတင်ပြသည်။
Like – 4.9K Share – 584
2021-04-25 at 5:06 PM
ပြည်သူနှင့်အတူရပ်တည်သည့်Mizzimaထံသို့ မိမိတို့၏ သီချင်း Videoများ ၊ ဖန်တီးမှုများ ၊ ဓာတ်ပုံများ ပေးပို့နိုင်ပါသည် …
ဗီဒီယို နှင့် ဓါတ်ပုံများ ပေးပို့ရန် – Viber No. +95-9421010100
Email ဖြင့်ပို့ရန် – [email protected]
PVTVထံသို့ မိမိတို့၏အနုပညာလက်ရာများနှင့် ဖန်တီးတင်ဆက်မှု(Video Content)များကို ပေးပို့နိုင်ပါသည် … 👇
တိကျမှန်ကန်သော သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများ ရခဲ့လျှင် ပို့နိုင်မည့် email လိပ်စာများနှင့် အခြားလိုအပ်လျှင် ဆက်သွယ်နိုင်မည့် email လိပ်စာများ …
Free to Air Mizzima TV Channelကို ဖမ်းယူကြည့်ရှု့နိုင်ပါပြီ …
PVTV၏ရုပ်သံအစီအစဉ်များအား Mizzima နှင့် DVBရုပ်သံလိုင်းများတွင်လည်း ဖမ်းယူကြည့်ရှူ့နိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါ၏ …
မြန်မာ့အရေး နောက်ဆုံးရ သတင်းနဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်း http://www.bbcburmese.com ရဲ့ တိုက်ရိုက် တင်ဆက်မှု လင့်ခ်မှာ အချိန်မရွေး ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။
2021-04-25 at 5:13 PM
Thiri Yadanar says:
2021-04-25 at 5:14 PM
Kyawmyo Win says:
2021-04-25 at 5:18 PM
CDM ဝန်ထမ်းအားလုံး ဘေးကင်းကြပါစေ။
2021-04-25 at 5:21 PM
2021-04-25 at 5:27 PM
Asean သည္ျပည္သူလူထုကုိ အသံတိတ္သတ္ေနတယ္
Ko Ko Key says:
2021-04-25 at 6:33 PM
Shwe Mu says:
2021-04-25 at 7:13 PM
ASEAN ကြေငြာချက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး NUG ရဲ့ သဘော‌ထား ထုတ်ပြန်ပေးပါ
Better seek u.s milirary training, at least indirect.
Tin Tin Zaw says:
2021-04-25 at 10:40 PM
2021-04-25 at 11:18 PM
အေးဗျာ အာဏာရှင်လူသတ်ကောင်မင်း အောင် လှိုင်က ဒင်းရဲ့အတ္တပဲကြည့် ဘယ်သူသေသေ ခွေးမသားမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ခွေးစိတ်ပဲရှိတော့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်ဝန်ထမ်းတွေမှာလဲ ရင်နာနာနဲ့ဆေးရုံတွေကိုကျောခိုင်းနေရတယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်
Aye Kyaw Htay says:
2021-04-26 at 10:48 AM
ဆရာ၊ဆရာမ ၊သူနာပြု့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားလုံးကို ဦးညွတ်ပါ၏၊ ဘေးကင်းကြပါစေ၊ကျန်းမာကြပါစေ၊အစစအရာရာအစဉ်ပြေကြပါစေ။
2021-04-26 at 1:38 PM
2021-04-26 at 7:47 PM
Rosy Khine says:
Pyiyadana Seinhla says:
2021-04-29 at 12:34 AM
-ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာ မှားယ…